Unofanira Bhizinesi Rako kuve paTwitter? | Martech Zone
Recently, Twitter yakaratidza kuti kusimba kweApple kusanganisa kweApple kweTwitter kune yakawedzera twitter kusaina ne25%. Mushure memakore ekuzvidzivirira, ini ndakazoputsa uye ndikawana iyo iPhone… ini ndinonyora nezvayo gare gare. Ini ndinoda kusunganidzwa kwakasimba pa iPhone ne Twitter - ndinofunga ndiri kunyura murudo ne Twitter zvese zvekare!
Vanopfuura mamirioni zana vanhu vakadirana kuTwitter kubvira 100, vachigovana nyaya, nzwisiso, uye mifananidzo yekati. Asi ndewe Twitter here iwe?
Iri rurimi-mune-dama flowchart kubva kuFlowTown neColumn Shanu pane kuti rako bhizinesi rinofanira kunge riri paTwitter rakanaka here!
Saka… mhinduro ndiHERE! Iwe unofanirwa kunge uri pa Twitter.
Tags: bhizinesi twitterunofanirwa kunge uri pa twitterrako bhizinesi rinofanira kunge riri pa twittertwitter yebhizinesisei uchifanira kunge uri pa twitter
Avatar Kugadzira: Kutonhora kana Kugadzira?
Iyo inonakidza infographic, asi yakanyanya kudimburwa uye kuoma. Kune zvakawanda zvimwe zvinhu zvekutarisa kana zvasvika pakusarudza kuti bhizinesi rako rinofanirwa kuve neiyo Twitter kuvapo.